သမ္မတထောက်ခံပွဲ ပထမနေ့ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံး (ဓာတ်ပုံသတင်း) | MoeMaKa Burmese News & Media
၉၆ နှစ် မြောက် အမျိုးသားနေ့ ရန်ကုန်မှာ အစုိုးရနဲ့ အရပ်ဖက်တုို့ ပူးပေါင်းကျင်းပ
ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံပြီး မစ္စတာကင်တားနားကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ သည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ယနေ့ (၂.၉.၂၀၁၂) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တို့၌ စည် ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မနက် ၉း၃၀ တွင် ၃၅ လမ်း၊ ၈၄ လမ်းထောင့် ဒဟတ္တောကျောင်းတိုက်မှာ စုဝေးကြပြီး၊ မနက် (၁၀) မှ ၃၅ လမ်းအတိုင်း ၈၄ လမ်းမှ စတင်ချီတက်ခဲ့ကြရာ ၈၄ × ၈၃ × ၈၂-တို့ကို ကျော်လွန်ပြီး ၈၁ လမ်းရောက်သောအခါ တောင်ဘက်သို့ကွေ့ပြီး ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀ လမ်း တို့ကိုကျော်လွန်ပြီး ၄၁ လမ်းအရောက်မှာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစပထမတွင် သံဃာတော်များက ဆန္ဒပြသူတို့၏ ဝဲယာလေးပေအကွာမှ လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း “သံဃာတွေမပါ ပါနဲ့။လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုရင် သံဃာတွေမလိုပါဘူး။ တပည့်တော်တို့အသက်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးပါ့မယ်”ဟု မြို့နယ်မှူးက ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုလျှောက်ထားသောကြောင့် သံဃာတော်များဝန်းရံခြင်းမပြုတော့ဘဲ ဆန္ဒပြအဖွဲ့၏ နောက်ဆယ်ပေအကွာမှ လိုက်လံ အားပေးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
သံဃာတစ်ဖွဲ့၊ လူတစ်ဖွဲ့၊ သံဃာတစ်ဖွဲ့ဖြင့် သံဃာတန်း လူတန်းကြီးဖြစ်သွားက ရှေ့ဆုံးတန်းမှ နောက်ဆုံးတန်းအထိ အကွာအဝေးမှာ မန္တ လေးအခေါ် သုံးပြ (သုံးလမ်း) အပြည့်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သံဃာအင်အားချည်း ငါးထောင်ကျော်ရှိပြီး၊ လိုက်ပါအားပေးသူ လူထု မှာ သံဃာထက်ပင်များပြားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၃၅ × ၈၄ လမ်းမှ စထွက်ထွက်ချင်း ကမ္ဘာမကြေသီချင်းသီဆိုပြီးထွက်ဖို့စီစဉ်ပေမယ့် မြိ့နယ်မှူးကတားလို့် အဆုံးထိမဆိုရဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်ကြရ ပါတယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ “နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာပါစေ။ အမိမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်ပါ”သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံတယ် ဆိုရင် လက်ခုပ်သြဘာပေးကြပါ” လို့ လက်ကိုင်ဟွန်းတိုလေးနဲ့တိုင်ပေးကြပြီး၊ လက်ဘေးဝဲယာမှ ပရိသတ်ကြီးက မေတ္တာပို့ကြ၊ လက်ခုပ်တီး ကြ၊ ဟစ်အော်ကြွေးကြော်အားပေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သတ်မှတ်လမ်းက တိုတောင်းတာကြောင့် လမ်းဆုံးရောက်တဲ့အခါ (၁) နာရီ မပြည့်သေးပါဘူး။ (၁၀) မိနစ်လိုသေးလို့ ရပ်ပြီး ဆန္ဒပြကြပေမယ့် မြို့နယ်မှူးကရုပ်သိမ်းခိုင်းတာကြောင့် (၅၅) မိနစ်မှာ ရုပ်သိမ်းပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆန္ဒပြအင်အား တစ်ရာအဖွဲ့ဟာ “သမ္မတကြီးကိုထောက်ခံခြင်းဖြင့် အမိမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်ပါ” စာတန်းနှင့် အမှန်ခြစ် အမှတ်အသားပါ သမ္မတကြီးပုံနှင့် ကြက်ခြေခတ်အမှတ်အသားပါ မစ္စတာကင်တားနားပုံ ဗီနိုင်းနှင့် သမ္မတကြီးနှင့် မစ္စတာအန်တိုနီယိုတို့ပြောဆိုနေပုံကို နောက်ခံထားပြီး သမ္မတကြီး၏စကားသုံးခွန်းကို အစဉ်အတိုင်းရေးထားတဲ့ဗီနိုင်းတို့ကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတကြီး၏ စကားသုံးခွန်းကတော့ ….
၁။ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေဟာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်လာ။
၂။ ဘင်္ဂလီတွေကို UNHCR အကူအညီဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်းအဖြစ် ထားရှိမည်။
၃။ တတိယနိုင်ငံများလက်ခံလိုက ပို့ပေးမည် .. ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို သံဃာထုရော လူထုပါ တစ်ခဲနက်ထောက်ခံအားပေးကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အရှင်ဝီရသူက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဦးဇင်းတို့သံဃာထု လူထုဟာ ဂိုဏ်းစွဲ ဝါဒစွဲ ပါတီစွဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မရှိပါဘူး။ စစ်သားရယ် အရပ်သားရယ်လို့ ခွဲခြားတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ပြည် သူ့ဘက်မှာရပ်တည်တယ်ဆိုရင် မည်သူမဆိုကို ထောက်ခံတယ်၊ ကြည်ညိုတယ်၊ လေးစားတယ်၊ ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ဆိုတာ ဒီပွဲက သက် သေပြသွားတာပဲ ဖြစ်တယ်”
သံဃာများပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိစေရဆိုတဲ့ သံဃနာယက အမိန့်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှင်ဝီရသူ ပြောပြတာကတော့ ….
“အစိုးရကိုဆန့်ကျင်မယ်ထင်လို့၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မယ်ထင်လို့၊ တားမြစ်ပုံရတယ်။ အခုလို ကြည်ညိုဖွယ်ဆောင်တဲ့ အမှုအရာမျိုးနှင့် ဝန်းရံ အားပေးတာမျိုးဆို လက်ခံမှာပါ” ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမသွားမီ ခရိုင်သာသနာရေးမှူးရောက်လာကြောင်း သံဃာတွေ မလိုက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပြောကြားလာကြောင်း၊ “မတရားတဲ့အမိန့်ကို မနာခံနိုင်ကြောင်း၊ တော်လှန်ရမှာဖြစ်ကြောင်း” အရှင်ဝီရသူက ပြန်ပြောလိုက်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
မွန်းလွဲ (၁) နာရီမှာ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။
လမ်း ၈၀ နှင့် ၁၂ လမ်း ကျုံးအနောက်မြောက်ထောင့်မှ စတင်ကာ လမ်း ၈၀ အတိုင်း တောင်ဘက်ကို ချီတက်ပြီး ၁၉ လမ်းရောက်တဲ့အခါ အနောက်ဘက်ချိုး ညောင်ပင်ဈေးမှ ၈၆ လမ်းအတိုင်း မြောက်ဘက် ၁၂ လမ်း ထိုမှလမ်း ၈၀ စုရပ်ပြန်ရောက်မှ ပြီးဆုံးကြပါတယ်။
သမ္မတထောက်ခံကြောင်း ဗီနိုင်းများနှင့် တီရှပ်များကိုင်ဆောင်ဝတ်ဆင်ပြီး ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သံဃာအင်အားက မနက်ကလိုမများပေးမယ့် ဒိုင်နာနှင့် လိုက်ထရပ်အမျိုးအစား ကားဆယ်စင်း ကြိုပို့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လူအင်အားက မနက်ကထက် အဆမတန် များပြားလာပြီး၊ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ကြွေးကြော်သံများ ဟစ်ကြွေးခြင်း၊ ကမ္ဘာမကြေ နိုင်ငံတော်သီချင်းနှင့် ဇာတိမာန်သီချင်း သီဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ထဲက ဒို့ဗိုလ်ချုပ် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာပါစေ။ အမိမြန်မာပြည်ကို ကာကွယ်ပါ။ သမ္မတ ကြီးကိုထောက်ခံရင် လက်ခုပ်တီးပါ” စတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြွေးကြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းတစ်လျှောက် လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးထောက်ခံကြတဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးကလည်း သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကို မေတ္တာပို့ကြ ဝမ်းသာအားရ ထောက်ခံကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အင်အားတစ်ရာသာ တရားဝင် ဆန္ဒပြခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် နောက်မှလိုက်လံအားပေးခြင်း၊ လမ်းဘေးဝဲယာမှ ရပ်ကြည့်အားပေးကြခြင်းများ ပြု လုပ်ကြသောကြောင့် ရဟန်းသံဃာများ၊ ပြည်သူလူထုများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ သံဃာထုလှုပ်ရှားမှုကို ဒုတိယရွှေဝါရောင်အခမ်းအနားဟု ကင်ပွန်းတပ်နေကြကြောင်းပါခင်ဗျာ။
2 Responses to သမ္မတထောက်ခံပွဲ ပထမနေ့ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံး (ဓာတ်ပုံသတင်း)
koswe on September 3, 2012 at 9:42 pm
www.editors@moemaka.com on September 5, 2012 at 11:12 pm